သဈသူခိုးဖမျးပေးနတေဲ့ PDF ကို ဖမျးဆီးနှိမျနငျးပေးဖို့ တရုတျသဈကုမ်ပဏီက “စကစ”ကို တောငျးဆို – Shwe Thadin
အလောငျးတျောကဿပ အမြိုးသားဥယြာဉျ သဈတောကွိုးဝိုငျးတှကေ အဖိုးတနျသဈတှကေို ကာကှယျတား ဆီးပေးနတေဲ့ PDF တှကေို အကွမျးဖကျသမားတှပေါဆိုပွီး အရေးယူပေးဖို့ ပီကငျးအခွစေိုကျ တရုတျသဈကုမ်ပဏီ(China Timber And Trade Association CTTA) က. ..
“စကစ” ဝနျကွီး ဦးခငျမောငျရီဆီကို စာရေးတောငျးဆိုထားပါတယျ။အလောငျးတျောကဿပ အမြိုးသားဥယြာဉျPDF က သဈတောကွိုးဝိုငျးအတှငျး မိုငျးတှထေောငျဖို့ ခွိမျးခွောကျနကွေောငျးနဲ့ အဲဒီလုပျရပျဟာ သဘာဝပတျဝနျးကငျြနဲ့ တောရိုငျးတိစ်ဆာနျတှအေတှကျ…
အငျမတနျအန်တရာယျကွီးတဲ့လုပျရပျလို့ စာထဲမှာ ဖျေါပွထားပါတယျ။မွနျမာ့အဖိုးတနျသဈတောတှမှော အဲဒီလိုပွုမူဖို့ခွိမျး ခွောကျတာကို နိုငျငံတကာအသိုကျအဝနျးနဲ့အတူ ကနျ့ကှကျကွောငျးလညျး တရုတျကုမ်ပဏီက ဆိုထားပါတယျ။တရုတျကုမ်ပဏီဘကျက မွနျမာသဈတော..
ဌာနကို ဒျေါလာ (၁) သိနျးလှူဒါနျးပေးမှာဖွဈသလို မွနျမာ “စကစ” ဘကျကလညျး သဈတောကွိုးဝိုငျးလုံခွုံရေးနဲ့ နယျမွငွေိမျးခမျြးရေးအတှကျ လကျ နကျကိုငျတပျတှေ ခထြားပေးရမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ဒါ့အပွငျ အကွမျးဖကျ PDF တှကေို ဖျေါထုတျဖမျးဆီးပေးဖို့လညျး….
တရုတျကုမ်ပဏီက တောငျးဆိုထားတာ တှရေ့ပါတယျ။အခုလ (၁၈) ရကျနကေ့ သဈခိုးကားတဈစီးကို ပညာပေးအနနေဲ့ ယငျးမာပငျ PDF က မီးရှို့ဖကျြဆီးခဲ့အပွီးတရုတျကုမ်ပဏီက အခုလို စာရေးတောငျးဆိုတာဖွဈပါတယျ။စာအရ အလောငျးတျောကဿပနယျမွကေ…
သဈခိုးထုတျမှုမှာ တရုတျကုမ်ပဏီ ပတျသကျနတောကို သကျသပွေနတောလို့ မုံရှာက သဘာဝပတျဝနျးကငျြ စောငျ့ရှောကျရေး ပညာရှငျတဈဦးက ပွောပါတယျ။စာရေးသားတောငျးဆိုတဲ့ တရုတျကုမ်ပဏီနဲ့ “စကစ” ဝနျကွီး ဦးခငျမောငျရီကို အခုစာနဲ့ပတျသကျလို့ အတ ညျပွုခကျြပေးဖို့ ကွိုးစားပမေဲ့ အခုထိတော့ မရသေးပါဘူး။ ။…
သစ်သူခိုးဖမ်းပေးနေတဲ့ PDF ကို ဖမ်းဆီးနှိမ်နင်းပေးဖို့ တရုတ်သစ်ကုမ္ပဏီက “စကစ”ကို တောင်းဆို
အလောင်းတော်ကဿပ အမျိုးသားဥယျာဉ် သစ်တောကြိုးဝိုင်းတွေက အဖိုးတန်သစ်တွေကို ကာကွယ်တား ဆီးပေးနေတဲ့ PDF တွေကို အကြမ်းဖက်သမားတွေပါဆိုပြီး အရေးယူပေးဖို့ ပီကင်းအခြေစိုက် တရုတ်သစ်ကုမ္ပဏီ(China Timber And Trade Association CTTA) က. ..
“စကစ” ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ရီဆီကို စာရေးတောင်းဆိုထားပါတယ်။အလောင်းတော်ကဿပ အမျိုးသားဥယျာဉ်PDF က သစ်တောကြိုးဝိုင်းအတွင်း မိုင်းတွေထောင်ဖို့ ခြိမ်းခြောက်နေကြောင်းနဲ့ အဲဒီလုပ်ရပ်ဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ တောရိုင်းတိစ္ဆာန်တွေအတွက်…
အင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့လုပ်ရပ်လို့ စာထဲမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။မြန်မာ့အဖိုးတန်သစ်တောတွေမှာ အဲဒီလိုပြုမူဖို့ခြိမ်း ခြောက်တာကို နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းနဲ့အတူ ကန့်ကွက်ကြောင်းလည်း တရုတ်ကုမ္ပဏီက ဆိုထားပါတယ်။တရုတ်ကုမ္ပဏီဘက်က မြန်မာသစ်တော..
ဌာနကို ဒေါ်လာ (၁) သိန်းလှူဒါန်းပေးမှာဖြစ်သလို မြန်မာ “စကစ” ဘက်ကလည်း သစ်တောကြိုးဝိုင်းလုံခြုံရေးနဲ့ နယ်မြေငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လက် နက်ကိုင်တပ်တွေ ချထားပေးရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင် အကြမ်းဖက် PDF တွေကို ဖေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးပေးဖို့လည်း….
တရုတ်ကုမ္ပဏီက တောင်းဆိုထားတာ တွေ့ရပါတယ်။အခုလ (၁၈) ရက်နေ့က သစ်ခိုးကားတစ်စီးကို ပညာပေးအနေနဲ့ ယင်းမာပင် PDF က မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့အပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီက အခုလို စာရေးတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။စာအရ အလောင်းတော်ကဿပနယ်မြေက…
သစ်ခိုးထုတ်မှုမှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီ ပတ်သက်နေတာကို သက်သေပြနေတာလို့ မုံရွာက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ရှောက်ရေး ပညာရှင်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။စာရေးသားတောင်းဆိုတဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီနဲ့ “စကစ” ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ရီကို အခုစာနဲ့ပတ်သက်လို့ အတ ည်ပြုချက်ပေးဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့ အခုထိတော့ မရသေးပါဘူး။ ။…
မွနျမာနိုငျငံမှာရှိတဲ့ ဗမာလူမြိုး ပျေါပေါကျ လာရခွငျး အကွောငျး(လူတိုငျးဖတျကွညျ့သငျ့ပါတယျ)